Yedzidzo yepamhepo Kosi, Chinese Mudzidzisi, Dzidza Chinese Pamhepo - Huayu
Tichiomerera kune yakakosha pfungwa ye "tsika yekuchinjana, mutauro wekutanga", chikoro chinotora nzira yekutanga ye "vadzidzisi muChina, vadzidzi kutenderera pasirese" kuitisa dzidziso yeChinese.
Rudzi urwu rwekusimudzira kudzidzisa ndirwo runonyanya kushanda! Zvakadaro, nekuda kwekuwanda kwemabhuku, parizvino pane chekumirira chinyorwa kuti usvike kumusangano
Pano, haungogone kusangana nemudzidzisi anoseka, asi zvakare batsira mwana wako kuti awane mudiwa waanodzidza naye, kuitira kuti usazove wega mukudzidza chiChinese.
Vanopfuura vadzidzi mazana mashanu vakadzidza Chinese nesu uye isu takagamuchira kurumbidzwa kwakawanda kubva kuvabereki nevadzidzi pasi rese.
Anoda kirasi yaMai Ding zvakanyanya, uye Mai Ding vanogara vachikwanisa kukwevera meso avo kukirasi. Aigara achinonoka paaiita basa rake rechikoro. Iye zvino achapedzisa basa rake rechikoro rekuChina achangopedza kirasi uye ini handichadi kumutarisa zvakare.
- Amai vaJay
Akakurira muUnited States uye hakuna shamwari dzeChinese dzakamupoteredza. Akatadza kutaurirana nasekuru nasekuru vake patakadzokera kuChina munguva yakapfuura. Gore rino ndichamudzosa kunoshamisira vanasekuru vake! Kutenda kunaMai Han nerubatsiro uye moyo murefu naRaymond, ndatenda zvikuru!
- Amai vaRaymond
Kutenda kwakakosha kuvadzidzisi veNomi Chinese online. Sezvo ndichifanira kuchengeta gotwe, handikwanise kuramba ndichidzidzisa vamwe vana vangu.
Mai Zhu vandibatsira zvakanyanya. Vana vangu vanga vachidzidza naye kweinopfuura gore. Iye zvino vava kugona kuverenga nyaya vakazvimiririra uye vanogona kutaura zvakatsetseka kwandiri muchiChinese kumba.
- Amai vaYihan
Ndinoonga chaizvo Mai Hu. Munguva yakapfuura, zvaigara zvichitora Leo kweinenge awa kuti awedzere masvomhu uye kubvisa. Mushure mekudzidza naAmai Hu kwemwedzi miviri, iye zvino anogona kupedzisa zana remasvomhu matambudziko mumaminitsi gumi uye chiyero chakaringana zvakare chakanyanya kwazvo. Ndinovimba kuti math dzaLeo dzinogona kuita zvirinani uye zvirinani uye handifanirwe kunetseka nezvazvo futi.
- Amai vaLeo
Ndeapi nzvimbo dziri nyore kudzidza Chine ...
Vanhu vazhinji vanoti kudzidza chiChinese kwakaoma. Muchokwadi, hazvisi. Kuwedzera kune chokwadi chekuti mavara echiChinese anoda chaizvo zviyeuchidzo zvekudzidzira, chiChinese zvakare chine yakapfava ichienzaniswa nemumwe mutauro ...
Vatorwa vanotaura Chinese zvakanaka ita izvi!
Munguva pfupi yapfuura, mudzidzi ane zero zero hwaro, mushure mekudzidza makirasi matatu, akandiudza kuti achachinjira kumudzidzisi anonyanya kutaura nemuromo Chirungu nekuti aisada kudzidza Chinese girama kana HSK-rel ...
tarisa nhau dzese
Nomi Chinese pamhepo iri pamhepo Chinese yekudzidzisa chikuva chakaiswa mari uye chakavakwa naNingbo Huayu Network Technology Co, Ltd. Nomi inzvimbo yevose vanoda tsika dzeChinese kutenderera pasirese kuti vadzidze, kuve neruzivo nekutaurirana. Tichiomerera kune yakakosha pfungwa ye "tsika kuchinjana, mutauro kutanga", chikoro chinotora nzira yekutanga ye "vadzidzisi muChina, vadzidzi kutenderera pasirese" kuitisa dzidziso yeChinese.
Nomi anoomerera pane hunyanzvi uye anotora iyo modhi yeInternet pamwe neDzidzo kuti tigare tichizvivandudza isu uye nekuvandudza ruzivo rwevashandisi.
Yedu "One-to-many, kudyidzana kwakavakirwa" musimboti kudzidzisa zvigadzirwa zvakave zvinobudirira zvakatangwa munyika zhinji pasirese uye zvakanyanya kurumbidzwa nevadzidzi vekunze.
dzidza kubva pamoyo wako, mufaro unotevera.